Diso tafahoatra hoy ireo mponina ny fanararaotana hataon’ity sefom-pokontany ity. Raha haka fanamarinam-ponenana ohatra dia manomboka amin’ny 10.000 Ar ny lelavola aloha amin’ izany no sady tsy misy rosia mazava, hoy hatrany ny vaovao. Tamin’ny andron’ny Tosika Fameno ihany koa dia nambaran’ireo mponina fa izay hakaiky ity sefom-pokontany ity ihany toy ny havany sy ny namany no nahazo sy nisitraka izany nefa samy sahirana avokoa. Miantso ny fandraisan’andraikitr’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ao Toamasina izy ireo araka izany. Tsiahivina moa fa saika tazana nanohana ity hetsika ity avokoa ny ankamaroan’ireo mponina tao amin’ity Fokontany iray ity.